Nnukwu gwongworo na -eburu akpa ihe n'akụkụ onye na -ebuli ihe na onye na -ebubata ya. CCMIE
Ụgbọala nọ n'elu akpa a na -ebuli ihe
Ụgbọ ala na -eburu akụkụ
Ihe nrịbama ebuli ihe
Truck nọkwasịrị n'ịnyịnya akpa Sid ...
Max. ikike ibuli elu: 37 ton
Ike injin: 371hp Euro II
Akụkụ gwongworo: 9800mm * 2500mm * 4100mm
Akuku: 4 axles
Taya: nkeji iri na abụọ
Max. ọsọ: 90km
Akụkụ akụkụ: MQH37 (ATP)
CCMIE na -emepụta Lifter Truck Container Side Loader Lifter nke etinyere na chassis 8X4, anyị na -etinyekarị ya na sinotruck chassis, na IVECO chassis, ma ọ bụ wụnye ya na obere ihe nkiri 20ft. Enwere ike iji ihe eji ebupute ngwongwo n'akụkụ ngwongwo maka ịkwanye na ibudata akpa 20ft nwere ikike ibuli tọn 37. CCMIE gwongworo akwalitere akpa ihe na -ebuli ihe n'akụkụ
site na njikwa akara ikuku ikuku ama ama yana ị nwekwara ike iji crane rụọ ọrụ site na ntuziaka
Ọrụ CCMIE anyị bụ ka ọ bụrụ onye na-eweta ihe nrụpụta akụrụngwa ọhụrụ nke igwe dijitalụ na akụrụngwa nkwukọrịta site na ịnye ọmarịcha ụdị na ụdị, ike ụwa na ike nrụzi maka nka ọkachamara nke China 20FT 40FT Sidelifter Truck Mounted Container Side Loader Lifter. Load, CCMIE anyị dị ka ọkachamara na mpaghara a akọwapụtara, anyị na -agba mbọ idozi nsogbu ụgbọ njem na ibu na nsogbu nbudata maka ndị ọrụ.
Ndị nrụpụta akụkụ akụkụ ndị China ahaziri nke ọma, ndị na -eburu akụkụ akpa, igwe niile ebubata na -ejikwa nke ọma wee hụ na izizi nhazi ngwaahịa. Na mgbakwunye, anyị nwere otu ndị njikwa na ndị ọkachamara dị elu, anyị na-arụpụta ngwongwo dị oke mma, ma nwee ikike ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ iji gbasaa ahịa ụlọ anyị na nke mba ọzọ. Anyị na -atụ anya n'ezie na ndị ahịa ga -eme nke ọma maka azụmaahịa anyị.
1) A naghị anabata ya ka ọ na -arụ ọrụ na -eburu ihe eji ebufe ihe n'akụkụ ụgbọ ala n'okpuru eriri ọkụ eletrik dị elu.
2) Gbaa mbọ hụ na ebe ọrụ gbasawanyere, tupu ịmalite ọrụ, jide n'aka na ị ga -amụ mpaghara ọrụ, ụzọ gaa na saịtị ọrụ, ọnụnọ nke ihe mgbochi ọ bụla na ọnọdụ nke igwe ndị ọzọ.
3) Ala ebe ọrụ kwesịrị ịdị ike ma dịkwa larịị, mkpọda ya erughị 3% na elu ya anaghị adakpu n'oge ọrụ.
4) Nye ọkụ zuru oke ka enwere ike ịhụ ngagharị nke igwe na ibu ahụ nke ọma.
Ọnọdụ gburugburu ebe obibi
Iji hụ na nchekwa ọrụ, jide n'aka na ị ga -egbo mkpa ndị a:
1) Ọnọdụ gburugburu ebe obibi: -20 ° C ~+40 ° C;
2) Oke ikuku anaghị agafe 13.8m/s.
Osote: Loader n'akụkụ
Enwekwu ngwongwo na -eru Stacker
Trailer na -ebudata onwe ya
Onye njikwa akpa ihe efu-ZHD90C8
Onye njikwa akpa efu-ZHD90C7
Trailer Side Lifter